Wasiirka Xanaanada, Xoolaha ayaa soo dhaweeyey ansixinta Sharciga Xanaanada Xoolaha – STAR FM SOMALIA
Iyadoo shalay Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen dhowr Hindise sharciyeedyo oo uu ka mid yahay Sharciga Xanaanada Xoolaha ayaa waxaa Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda Soomaaliya ay soo dhoweysay talaabadii uu Baarlamaanka sharcigaas ku meel mariyey.
Wasiirka Xanaanada, Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa soo dhoweeyay talaabadii Baarlamaanka uu sharcigaas ku meel mariyey, isagoo sheegay in sharciga xanaanada xoolaha uu muhiimad gaar ah u leeyahay dalka.
Sidoo kale Wasiirka Xanaanada Xoolaha ayaa sheegay in sharcigan meel marintiisa uu kusoo aaday xilli loo baahnaa iyo in la dhiiri geliyo caafimaadka xoolaha iyo ganacsigooda.
Shalay ayaa mudaniyaasha Baarlamaanka Soomaaliya kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, waxa ay ku ansixiyeen sharciga Xanaanada Xoolaha, iyadoo ay ogolaadeen 150 mudane halka sedax mudanena ay ka aamustay,waxaana sidoo kale ansixinta sharcigan uu kusoo beegmayaa xilli dhawaan dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay kala saxiixdeen iskaashiga caafimaadka xoolaha.
Taiwan oo Shabakad Raadaar ka sameynaysa Xeebaha Soomaaliya